पुष्पलसँग जोडी जमाउँदै नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह !::Hamrodamak.com
पुष्पलसँग जोडी जमाउँदै नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह !
काठमाडौँ, २१ कार्तिक । चलचित्र ‘अझै पनि’ निर्माण गरेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रबेश गरेकी निर्मात्री पूनम गौतमले फेरी नयाँ चलचित्र निर्माण गर्नलागी हुन् ।
उनले निर्‍माण गर्न लागेको चलचित्रमा अहिले चलचित्र क्षेत्रकी सफल नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई नायिकाको रुपमा अभिनय गराउन लागेकी छिन् ।
नवल नेपालले निर्देशन गर्न लागेको यस चलचित्रका लागी नायिका रेविका गुरुङ र नायक पुष्पल खड्का लाइ अगाडिनै निर्माण टिमले अनुबन्धित गरी सकेको छ ।
तीन साथीहरुको कथा बोल्ने यस चलचित्रको छायांकन माघको तेश्रो साता बाट सुरु हुनेछ । नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले यस चलचित्रको लागी १५ लाख पारिश्रमिक लिएको बुझिएको छ । शाहले ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’पश्चात यस चलचित्रमा काम गर्न लागेकी हुन ।